Baddu waxay leedahay kheyraad kala duwan oo awood u leh soo saarida tamarta | Cusbooneysiinta Cagaaran
Baddu waxay leedahay kheyraad kala duwan oo awood u leh inay dhaliso tamar
Nuria | | Awoodda dabaysha, Tamarta Wave, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo, Teknolojiyada cusub
Noocyada kala duwan ee tamar dib loo cusbooneysiin karo, kuwa ay baddoodu tahay isha koowaad ay yihiin kuwa ugu waxtarka badan. Hadalkani wuxuu ka soo jeedaa xaqiiqda ah in maadaama aysan "hoosku" ka jirin badaha, ilaha sida hawada, tusaale ahaan, si buuxda looga faa'iideysan karo. Si kale haddii loo dhigo, ma jiraan wax carqalad ah oo hawadana si buuxda ayaa loogu isticmaali karaa haddii ay timaaddo marawaxadaha tamarta dabaysha, kuwaas oo leh baallahooda waaweyn oo dabaysha si tartiib tartiib ah u soo ururiya una beddelaya tamar boqolkiiba badan.
Shaki la'aan, dabaysha badda waxay noqotay tan ugu soo noqnoqota ee nooceeda ah, horeyba dhammaadkii 2009 waxay lahayd awood rakib ah oo ah 2 kun 63 Mw inkasta oo ay jiraan hoggaamiyeyaal ka socda waaxda sida Danmark iyo Boqortooyada Ingiriiska, waddamo ay ka mid yihiin Shiinaha ka go'an inay kordhiyaan awooddooda, iyo horumarinta cilmi baaris dheeraad ah, horumar iyo injineernimo hal abuur leh oo u oggolaaneysa ka faa'iideysiga ugu badan ee beeraha dabaysha adoo horumarinaya marawaxadaha dabaysha si hufan uga shaqeyn kara badda.
Laakiin badda dhexdeeda waa isha ilaha dhowr ah, iyadoo laga duulayo macnaha tamarta ay soo saaraan mowjadaha (tamarta mootada mawjadaha) sidoo kale waxaa loo rogi karaa koronto.
In kasta oo uu ka horumarsan yahay, haddana waxay leedahay farsamooyin tijaabo ah:
- Qaab-dhismeedyada ku dhegan xeebta ama badda (jiilka koowaad).
- Dhismayaasha badda ee leh walxaha sabeeya ama salka hoose ee biyaha dusha sare (jiilka labaad).
- Dhismayaasha badda, biyaha qoto dheer ee xadkoodu yahay 100 mitir, oo leh walxo soo aruuriyayaal sabeynaya ama qarqinaya (jiilka saddexaad).
- Dalka Basque-ka mashruuc ayaa lagu soo saarayaa iyadoo la adeegsanayo teknolojiyad la yiraahdo Jidka Oscillating Water taas oo dhaqdhaqaaqa hirarka ay soo saaraan cadaadis mug mug leh oo hawo ah oo ku jira khaanad biyo hoosaad ah, oo leh awood ku filan hawadaas inay ku socoto oo ay ku shaqeyso marawaxadaha.
- Qalabka kale waa Nalalka ama wax yareeyayaasha, Ka faa’iideysta dhaqdhaqaaqa mowjadaha si ay u soo saaraan tamar farsamo oo loo rogo koronto.
- Teknolojiyadaha kale waxay ku saleysan yihiin nidaamyada buux dhaafiya iyo terminators.
Waxay ku saabsan tahay ka faa'iideysiga kor u kaca iyo hoos u dhaca badda ee hirarka soo saaro. Mabda’a ayaa ah in haanta biyaha lagu buuxiyo hirar sare isla markaana ay faaruqiso mowjadaha hoose, marka heerka biyaha u dhexeeya badda iyo taangiga ay gaaraan heer cayiman, biyaha waxaa la mariyaa marawaxadaha soo saara tamarta korantada. Faransiiska (La Rance) waxaa ku yaal xarun noocaas ah.
Nidaamku wuxuu leeyahay cilladaha: dhererka hirarka waa inay ka badnaadaan 5 mitir, taas oo ah xaddidaad maxaa yeelay xaaladdan waxaa lagu buuxiyaa oo keliya meelaha qaarkood. Faa’iido darrada labaad waa iyada saameynta deegaanka sare tan iyo markii xaaladahan ay ka dhacaan meelaha muhiimka ah nidaamka deegaanka ee badda.
Qiimeynta kuleylka ee Badweynta
Waa farqiga heerkulka ee u dhexeeya dusha sare ee badda iyo biyaha moolka dheer, oo kala duwanaanshahooda heer kulka waa inuu ka weynaadaa 20º C (dhulbaraha iyo dhulbeereedka).
Waa tikniyoolajiyad ka bilaabeysa dalal ay ka mid yihiin India, Japan iyo Hawaii.
Waxay loola jeedaa adeegsiga farqiga u dhexeeya cadaadiska u dhexeeya biyaha macaan ee webiyada iyo cusbada badda. Shirkada Norway laga leeyahay ee Statkraft waxay soosaaraysaa mashruuc Oslo fjord mabaadi'daas.
Waxay ku saleysan tahay farqiga u dhexeeya cusbada ku jirta biyaha wabiga iyo biyaha badda. Marka ay biyahani isku darsamaan, waxaa la soo saaraa tamar u rogi karta koronto.
Baddu waxay bixisaa awood badan oo tamar laakiin teknoolojiyadda looga faa'iideysan karo weli waxay ku jirtaa wajiga tijaabada, marka laga reebo dabaysha badda ka socota, oo durba la tartamaysa.
Caqabada ugu weyn ee hortaagan tamarta badda waa kharashka badan ee looga faa'iideysto, tani waxay dib u dhigtay horumarkiisa marka loo eego kuwa kale tamar dib loo cusbooneysiin karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Awoodda dabaysha » Baddu waxay leedahay kheyraad kala duwan oo awood u leh inay dhaliso tamar
Waad ku mahadsantahay warbixinta
Doomaha raaxada iyo wasakheynta ay dhaliyaan
Mootooyin koronto loogu talagalay booliska